people Nepal » युवतीहरु किन मन पराउँछन् भान्टा ? युवतीहरु किन मन पराउँछन् भान्टा ? – people Nepal
युवतीहरु किन मन पराउँछन् भान्टा ?
काठमाडौं भाद्र २१।स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्ने हो भने भान्टा निकै फाइदाजनक हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहने हुँदा धेरैजसो युवतीहरु भान्टालाई मन पराउने गर्छन् । उनीहरु स्वादिलो तरकारी तथा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरुको सौखिन हुन्छन् । हाम्रो गाउँघर तिर पाइने भाण्टामा निकै पौष्टिक तत्व पाइन्छ ।
– भान्टामा भिटामिन सि पनि पाइन्छ । भान्टामा पाइने पौष्टिक तत्वले विभिन्न रोगहरुसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गराउननुको साथै शरिरमा हुने संक्रमणहरुबाट पनि बचाउने गर्छ ।
– स्वास्थ्यको मामिलामा भान्टालाई अन्य तरकारी भन्द कयौँ गुण लाभदायीक मानिन्छ । भाण्टाले हाम्रो शरीरलाई स्वास्थ्य राख्ने गर्छ । यसमा स्वस्थ तत्व पाइन्छ । यसमा धेरै हेल्दी इलिमेन्ट पाइने भएकाले कुनैपनि दोस्रो सब्जीको जरुरत पर्दैन् । यो सजिलै पाइने र सस्तो तरकारी पनि हो ।
– वजन कम गर्न भेन्टाले धेरै सहयाेग गर्छ । यसले क्यालोरी कम गर्न मदत गर्छ । यो फाइबरबाट भरिपुर्ण हुन्छ । भ्यान्टाबाट बनेको कुनैपनि कुरा खादा भारीपन महसुस हुन्छ । यसकारण पनि तपाई कम खाना खानुहुन्छ र त्यसैपनि वजन कम हुन्छ ।
– भेन्टाले दाँत दुखाईलार्इ कम गर्न मदत गर्छ । यसको रसले दाँतमा पेन किलरको काम गर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउछ ।
– भान्टामा भिटामिन सि पाइन्छ जसले इन्फेक्सनबाट टाढा हुन मदत गर्दछ । इम्यून सिस्टमलाई बुस्ट गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
– कोलस्ट्रोल कम गर्न सहयाेग गर्छ । यसमा पोटासियम र म्याग्नेसियमले भरिपूर्ण हुन्छ जसको कारण कोलस्टोरलाई बढ्न दिदैन् ।